पल–पल टिक्ने र पलभर नटिक्ने दुबै अस्तित्वमा हुन्छ । तपार्इँ जन्मेदेखि अहिलेसम्मका सबै क्षण अलग हो ? होइन । सबै अलग भए अहिले तपाईँलाई जन्मेदेखिकै उही मान्छे हो भनेर भन्ने आधार के ? सबै उही हो ? त्यो पनि होइन । उही भए बालकबेलाको तपाईँ र अहिलेको तपाईँ कसरी धेरै फरक हुनुभयो ? त्यसैले केही उही हो, केही फरक हो । केही कुरा छिटो फेरिन्छन्, केही कुरा ढिलोसम्म उही रहन्छन् । लाओत्सेको यो हेराइ नितान्त द्वन्द्वात्मक देखिन्छ । हाम्रो दृष्टिकोण यस्तै द्वन्द्वात्मक हुनुपर्छ ।